Published Wed Mar 20 2019 18:53:47 GMT+0000 (UTC)
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa, right, visits Chimanimani, about 600km south east of Harare, Zimbabwe, Wednesday March 20, 2019. Mnangagwa visited a part of Chimanimnani affected by cyclone Idai and promised assitance in the form of food and rebuilding of homes. Hundreds are dead, many more missing and thousands at risk from massive flooding in Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa, left, visits Chimanimani, about 600km south east of Harare, Zimbabwe, Wednesday, March, 20, 2019. Mnangagwa visited a part of Chimanimnani affected by cyclone Idai and promised assitance in the form of food and rebuilding of homes. Hundreds are dead, many more missing and thousands at risk from massive flooding in Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa, center, visits Chimanimani, about 600km south east of Harare, Zimbabwe, Wednesday March 20, 2019. Mnangagwa visited a part of Chimanimnani affected by cyclone Idai and promised assitance in the form of food and rebuilding of homes. Hundreds are dead, many more missing and thousands at risk from massive flooding in Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Rescuers carry a body from a military helicopter into a waiting hearse in Chimanimani, about 600 km south east of Harare, Zimbabwe, Wednesday March 20, 2019. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa visited a part of Chimanimnani affected by cyclone Idai and promised assitance in the form of food and rebuilding of homes. Hundreds are dead, many more missing and thousands at risk from massive flooding in Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)